Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo howlo shaqo u jooga dalka Uganda – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo howlo shaqo u jooga dalka Uganda
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo howlo shaqo u jooga dalka Uganda
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo howlo shaqo u jooga dalka Uganda ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Kampala.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo uu wehliyo Taliye xigeenka Ciidanka Xooga Dalka Sareeyo Guuto Maxamed Cali Bariise iyo wafdi la socdo oo maalmahan safar shaqo ku jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa maanta soo booqday xarunta safaaradda Soomaaliya ee Uganda ku leedahay.
Siihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur oo safaaradda kusoo dhaweeyay ayaa uga warbixiyay wafdiga sida ay diblumaasiyiinta safaaradda ugu shaqeeyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo marxalahii ay soo martay safaaradda ilaan1973 oo ahayd markii safaaradda la furay
Siihayaha ayaa sidoo kale taliyaha iyo taliye xigeenka u sharaxay qaabka ay safaaradda u shaqeyso iyo howlaha ay u qabato shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda, waxa uuna siihayaha sheegay in hada safaaradda shaqo fiican u hayso.
Dhankiisa Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka mahadnaqay sida safaaradda loogu soo dhaweeyay, isagoo sheegay in laga shaqeeyo safaaradda sidii muuqaalkaada loo sii qurxin lahaa.
Taliyaha Booliska ayaa sidoo kale madaxda ku amaanay hoosha fiican ay u haayaan shacabkooda Soomaaliyeed.
Taliyaha Booliska, Taliye xigeenka Ciidanka Xooga wafdiga la socda ayaa maalinta bari ah shir uga furmi doonaa magaalada Kampala oo kasoo qayb galayaan taliyaasha hay’adaha amniga ee dalalka Afrika.